गोविन्द परियार, सुजित महत , गोविन्द लुइँटेल सोमवार, बैशाख १८, २०७४ 6552 पटक पढिएको
राजनीति र अर्थतन्त्रका २५ वर्ष करिब तीन दशकदेखि मुलुकको आर्थिक नीतिको आर्किटेक मानिएका डा. रामशरण महत सबैभन्दा बढी समय अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने भाग्यमानी मन्त्री हुन् । आर्थिक उदारीकरणलाई मुलुकमा प्रवेश गराएरबापत उनले ‘कम्युनिस्ट'हरूको विरोध खेपे । पछिल्लो समय उनैले बनाएको अर्थतन्त्रको ‘फाउन्डेसन'मा एमालेदेखि माओवादीसम्म दौडिन थालेका छन् । यसले राम्रो कुरा राम्रै हुन्छ भन्ने चरितार्थ भएको छ । स्कुले विद्यार्थीदेखि कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका डा. महत स्वदेशी र विदेशीले आर्र्थिक विषयमा छलफल र परामर्श गरिँदा नबिर्सने नाम हो । अर्थराजनीति, उदारीकरण र खुला अर्थ नीतिका विज्ञ डा. महत कांग्रेसभित्र हक्की नेताका रूपमा परिचित छन् । झन्डै तीन दशकको राजनीति र अर्थतन्त्रमा सूक्ष्म ज्ञान राख्ने डा. महतसँग अन्नपूर्णकर्मी गोविन्द परियार, सुजित महत र गोविन्द लुइँटेलले विभिन्न पक्ष र मुलुकको भावी राजनीतिक परिदृश्यबारे गरेको वार्ताः
देशमा ठूलो परिवर्तनपछि जनतामा धेरै आकांक्षा पैदा भएका थिए । साधन स्रोत निकै कम थियो । जम्मा राजस्व १२ अर्ब रुपैयाँको थियो । त्यसबेला ३६ अर्ब जतिको बजेट आउँथ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोदेखि कर्मचारीको खर्च कसरी धान्ने ? बीपीले ०१५ सालमा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा भन्नुभएको कुरा पढेको थिएँ । ‘तपाईंहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको छ, खानेपानी, बाटो आदिको माग लिएर । हामीले काम गर्ने बेला हो । सबैको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं । उत्पादन बढाएर मात्रै सबैको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छौं । विपक्षीले उचालेर आकांक्षा बढाउने काम मात्रै गर्छन् । हामी जिम्मेवार भएर बस्नुपर्छ', उहाँले भनेका यी कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।
योजना आयोगमा के-के सुधार गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञको टीम बनाए । राजनीतीकरण हुनै दिइएन । अर्थ मन्त्रालयको अनुभवी टीम हामीसँग थियो । विश्वव्यापी सुधारको लहरले हामीलाई काम गर्न घच्घच्याइरहेको थियो । हाम्रो देशमा उदारीकरण आवश्यक छ, पूर्वी एसियाका देश निकै अगाडि बढे, हामी धेरै पछाडि पर्‍यौं भन्ने हामीलाई महसुस भएको थियो । चीन पनि आर्थिक रूपले शक्तिशाली बन्दै गएको थियो । ‘टीम वर्क'को कारण पनि यो सम्भव भएको हो । त्यो समय हाम्रो सिकाइको समय थियो । भारतभन्दा हामी अघि थियौं । राजनीति अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व आदि कारणले कमी कमजोरीलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै उदारीकरणबाट अधिकतम लाभ लिन अलि चुक्यौं ।
सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको भूमिका छ । त्यसमा पनि योजना आयोगले काम गर्नुपर्छ । आयोग ‘पोलिसी सपोट' गर्ने सरकारको ‘थिंक ट्याङक' हो । मन्त्रालय दैनिक काममै व्यस्त हुन्छन् । नीतिमा गम्भीर छलफल गरी त्यसको अभ्यास गर्ने मन्त्रालय उपयुक्त देखिएका छैनन् । मन्त्रालयलाई बलियो ‘एड्भाइजरी बडी' चाहिन्छ । त्यो कामचाहिँ योजना आयोगले पूरा गर्‍यो । आयोग चाहिँदैन भन्नेलाई छुट छ ।
सिन्डिकेटवाला निकै ‘पावरफुल' छन् । राज्य प्रणाली कमजोर हुँदा यस्ता समस्या आउँछन् । सरकारसँग आँट हुनुपर्छ त्यो तोड्ने । सिन्डिकेट उदारीकरणको उपज होइन, गभर्नेन्समा समस्या देखिँदाको ‘बाइप्रडक्ट' हो ।
न्युरो अस्पतालमा तिघ्राको अप्रेसन गर्दा बिरामीको मृत्यु 5003
श्रममन्त्री भन्छन्ः सिन्डिकेट लाउनेको दिनगन्ती सुरु भयो 2720